सक्खर चिनी भन्दा गुलियो गीत (भिडियाे सहित) - ConfuseNepal
श्रावण २५, २०७७ – करिब एक बर्ष अघि उनीबारे फिचर बनाउँदै गर्दा स्वयं पदम राई एक संघर्षरत गायक थिए । यो त्यहीबेला थियो जतिबेला उनले ”पछि पछि लाएर …” बोलको गीत भर्खर भर्खर सार्बजनिक गरेका थिए ।
त्यस बिन्दुबाट यहाँसम्म आईपुग्दा धेरै चीज फेर बदल भैसकेको छ । उक्त गीत चर्चित भयो । दर्शक स्रोताले औधी रुचाए, रुचाई रहेकै छन । भ्यूजका हिसाबले गीत करोड क्लबमै दर्ज हुन सफल भयो । अब पदम राई करिब करिब स्थापित गायकको रुपमा दरिने चरणमा छन । उनी चर्चाको घेराभन्दा पर छैनन यतिबेला । आफूमा भएको गायन कला, लामो एवं अनुशासित संघर्षको प्रतिफल स्वरूप पदम यस अवस्थामा आईपुगेका हुन ।
उनै पदम राई अर्को नवीनतम साङ्गीतिक कोसेली लिएर पुनः दर्शक स्रोताहरूमाझ आईपुगेका छन । यसपटक उनी मायाको बोली औधी गुलियो हुने कुरामा जोड दिंदै प्रस्तुत भएका छन, ”सख्खर चिनी” बोलको गीत मार्फत । पदमले यसपटक पनि उही सैलीलाई निरन्तरता दिएका छन । गीत नाँच आधारित छ । फास्ट बिटमा छ । श्रवणीय छ । सुनुँ सुनुँ लाग्ने छ । सुनेपछि नाँचु नाँचु लाग्ने छ । अघिल्लो झैं यसमा पनि चर्चित गायिका मेलिना राईको सह-गायन, साथ छँदैछ ।
शब्द संयोजनका हिसाबले यो गीत उनको अघिल्लो गीतभन्दा अझ चटपटे बन्न गएको छ । डिपी खनाल यस्तो गीत लेख्न माहिर मानिन्छन । नत्र सख्खर चिनीको गुलियोपनसँग मायाको मिठोपन तुलना गर्न सक्ने कल्पना शक्ति अरूसँग कहाँ हुन्थ्यो र ? गीतमा लय हालेका छन शंकर थापा ‘इस्माईल’ले । उनी यतिबेला यस्तै चटपटे गीतहरू बनाउन सिपालु ठानिन्छन । सुमन केसी संगीत संयोजन तारिफ योग्य छ । क्यमेराको फ्रेम अघि, कार्टन क्रुका सरोज अधिकारी र आश्मा बिश्वकर्माले नाँचेका छन । यद्धपि, उनीहरूको नाँच सैलीलाई चाहिने गीतको टेम्पो चैं अलि अपुग हो कि जस्तो लाग्छ । उनीहरूलाई धेरै फास्ट बिटमा नाचिरहेको देख्दै आएको हुनाले यस्तो लाग्न पुगेको हो कि त ! तर पनि गीतमा उनीहरूको उपस्थिति आफैंमा सानदार हुँदै हो ।
दृष्य निर्माणको निर्देशन डान्सिङमा ख्याति कमाएका गम्भीर बिष्टले गरेका छन । उनले निक्कै भव्य सेटहरू प्रयोग गरेका छन । गीत केन्द्र मोसन पिक्चर्सको अफिसियल युट्यूव च्यानलबाट रिलिज भएको छ । गीत सार्बजानिक भएको करिब एकहप्ता भएको छ । भर्खर चारलाख भ्युज कट्दैछ । के यो अलि कम भएन र ? ‘त्यति उत्साहजनक त नहोला नै तर निराशाजनक पनि होईन होईन यो’, कन्फ्यूज नेपालको चासोमा पदम भन्छन – ‘गीतले बिस्तारै पिक अप लिनेमा आशावादी छु ।’
← वीपी प्रतिषठानका दुइ चिकित्सक पनि काेराेना संक्रमित
संक्रमित चिकित्सकको श्रीमतीमा पनि कोरोना संक्रमण →